Zvese zvinoratidza kuti iyo iPhone haigamuchire 5G kusvika 2020 | IPhone nhau
Ipo kune mamwe ese madhizaini ane Android OS zvinotarisirwa kuti mwero mutsva we Kubatanidza kwe5G kunosvika kubva kukota yekutanga ye2019 (mu MWC iyo yakaitirwa muBarcelona gore rega) yeiyo iPhone izvi zvinoita sekunge hazvisi kusvika 2020.
Iyi ndiyo nhau iyo Fast Company yakatisiya, mune izvo zvinonzi izvo Apple ichave yekupedzisira kujoina kutumirwa kweiyo 5G. Zviripachena Apple haisimbise uye hairambe iyi nhau sezvo yagara ichiita, saka zvichave zvakafanira kuve nemoyo murefu uye kuona kuti chokwadi chiripo sei mazviri.
Parizvino dambudziko hombe raizove modem
Uye ndizvo izvozvo Apple ine matambudziko epamutemo neQualcomm uye saka ichakwira mama Intel modems muzvizvarwa zvinotevera zve iPhone, zvinoreva kuti izvi hazvina kugadzirirwa nhasi kushandisa tekinoroji iyi. Zvinotaridzawo kuti Intel's modem (inova iyo 8161) ingangove nematambudziko nekupisa kupisa uye kushandisa bhatiri, izvo zvinoita kuti kambani yeCupertino itarise pazviri wobva wawedzera mukana we5G kubatana.
Fast Company inonyevera izvi uye nepo izvi zvichiitika isu tatova patafura kuti vakwikwidzi vakuru veApple vakaita seHuawei kana Samsung vari kuzoenderana neaya ma network e5G mumwedzi mishoma. Xiaomi ndeimwe yeayo achave neiyi yekubatanidza uye Apple inofanirwa kutsvaga mhinduro kuchinetso kuti isazosiiwa mune izvi, zvinoreva kuti inogona kusarudza kukwirisa mamodemu eMediaTek kugadzirisa dambudziko. Tichaona zvinoitika chaizvo nekufamba kwemazuva, asi izvi ndizvo rimwe dambudziko rinowedzerwa ne "kurwa" neQualcomm.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvese zvinoratidza kuti iyo iPhone haigamuchire 5G kusvika 2020
Tichifunga nezvekuti hapana 5G netiweki dzakatumirwa izvozvi uye kuti ivo vachatanga kuendesa chimwe chinhu mukati megore rinouya…. Sezvakaitika ne4G, zvinotora makore maviri kana matatu kuti foni iine tekinoroji iite chero pfungwa. Zvekare Apple inodzika nzira yayo pane zvine musoro uye kwete pamisoro isina musoro.
Pindura kune omnion
Iyo iPhone 8 uye 8 Plus yatove kuwanikwa pane yakadzorerwa webhusaiti